Hem / Xaqaaga iskoolka	/ Waxaad xaq u leedahay in aad wax barato oo aad hormarto
Waxaad xaq u leedahay in aad iskoolka ka barato wax walba oo macquul ah. Macalinkuna waa in uu ardayda u suurta geliyaa in ay wax bartaan oo ay horumar gaaran.
Dhamaan dadka way kala duwanyihiin. Waxaa kakala imaanay meelo kala duwan, waaxa aaminsanahay waxyaabo kala duwan, muuqaal ahaan iyo fikrad ahaana kala duwan. Anaga oo kala duwan ayuu qof walbana maadooyinka ku kala fiicanyihiin. Sidaas darteed waa muhiim in uu macalinku ogyahay arday walba waxa uu ku fiicanyahay, waxa uu jecelyahay iyo waxa uu jecleyn. Markaas ayeey waxbarashado xiiso u yeelanaysaa dhamaan ardayda fasalka.
Waa in aad ogaataa sababta aad waxyaabaha qaar u baranaysid
Macalinkaaga waa in uu kaa caawiyaa adiga iyo ardayda kale oo fasalka kula dhigata in aad fahantaan sababta ay muhiim u tahay qofku in uu iskoolka wax ka barto. Qofna ma jecla ayaan filayaa dhamaan waxyaabaha iskoolka laga wada dhigo. Macnaheedo ma ahan in aysan macno ku fadhinin baradhadooda. Laakiin waa in uu macalinka ku caawiyaa si aad u fahantid sababta ay muhiim u tahay iyo si ay xiisad u yeelato ama ay u fududaato waxa aad baranaysid.
waxaa kale oo lagaa caawinayaa si aad u hesho qaab aad wax u barato
Macalinku xataa waa in uu isku dayaa sida ugu muhiimsan uu arday walba oo fasalka dhigta uu wax u baranlahaa – iyo in uu ku fahansiiyo sida ugu haboon uu aad wax u barankarto. Macaliku waa in uu kugu tijaabiyaa siyaabo kala duwan oo aad ku shaqayn karto. Sidaas darteen ma ahan in aad uun sidii aad jecleed aad ku shaqayso.
Ma ahan in aad fasalka iska fadhiso adiga oo haysan waxa qabato
Hadii aad u aragto maadadaa uu macalinka dhigayo in ay fududahay waa muhiim in aad macalinka u sheegtaa ama qof kale oo weyn. Si markaa uu iskoolku kuu caawiyo uu kuu siiyo casharo kale oo aad wax yaabo cusub ka baranayso. Maraka qaar ardaygu waxa uu u baahanyahay in la canaanto si uu iskoolku xiiso ugu yeesho – qofna ma ahan in uu fasalka iska dhex fadhiyo cashir la'aan.
Waa maxay masuuliya ku saaran arday ahaan?
Masuuliyadaau waxa ay tahay in aad foojigantahay marka uu cashirku socdo, si aad u fahanto oo aad u samayso shaqada uu macalinka kuu diyaariyay. Hadii aad u aragto in ay waxbarashadu fiicneyn waa in aad macalinka u sheegta si uu macalinku suurtogal ugu noqoto in uu wax kabadalo waxbarashada.
Hadii ay kugu adkaato in aad maaddo ku guulaysato waxaa ku caawinaya iskoolka. Waxay doontada ha noqoto sababta aad dib ugu dhacday. Wixii dheeraad ah ka aqriso halkan:
Waxaad xaq u leedahay in aad hesho caawinaada aad u baahantahy
Hadii aad doonayso in aad barato wax dheeraad ah
Hadii aad u aragto in aanad iskoolka ka baranaynin wax kugu filan waxaad la hadli kartaa macalinkaaga. Hadii ay taa ku caawin weyso waxaad utagtaa maamulaha asaga ayay shaqadiisu tahay in ay ardayda dhammaan eey helaan waxbarasho fiican oo sida ugu macquulsan ah inta eey iskoolka dhigtaan.